Makumi matatu akasarudzwa mitsara nezve mabhuku | Zvazvino Zvinyorwa
30 akasarudzwa mitsara nezve mabhuku
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Vanyori, Mabhuku
Mabhuku, mabhuku uye rimwe bhukus. Tsanangudzo dzakawanda, pfungwa, nzira dzekuzvinzwisisa kana kuzvidudzira. Zvinorevei chaizvo, chii chavanotiunzira, kutiburitsa kana kutora kubva kwatiri, nei vari uye vari. Vese vanyori vanovanyorera, chero nguva uye nyika, vane maonero avo. Ichi ndicho (chidiki) kusarudzwa kwemitsara makumi matatu akasarudzwa pamusoro pavo.
30 mitsara pamusoro pemabhuku
Kana ivo vakatsikisa chimwe chinhu kwauri, gadzirira kushamiswa kwekusachiwana mune chero chitoro chemabhuku. Bill adler
Bhuku harina kunyorwa kamwechete uye zvachose. Kana iri bhuku chairo, nhoroondo yevanhu inowedzera chishuwo chayo. Louis Aragon
Mamwe mabhuku anokanganikwa zvisina kukodzera; hapana chinoyeukwa pakarepo. Wystan Hugh Auden
Bhuku rinofanirwa kubuda uye kunotsvaga muverengi. Francis Ayala
Bhuku roga roga zvakare kuwanda kwekusanzwisisana kwarinopa. George Bataille
Bhuku risingakodzeri kuverengwa kaviri harifanirwe kuverengerwa zvakazara. Federico Beltran
Ndangariro dzakasiiwa nebhuku dzimwe nguva dzinonyanya kukosha kupfuura iro bhuku pacharo. Adolfo Bioy Casares
Bhuku chinhu chimwe chete pakati pezvinhu, vhoriyamu yakarasika pakati pemavhoriyamu ayo anogara asina hanya nenyika; kusvikira awana muverengi wake, murume akagadzirirwa zviratidzo zvake. Jorge Luis Borges
Kana iwe usingakwanise kutaura zvaunofanira kutaura mumaminitsi makumi maviri, zvirinani dzokera kumashure uye nyora bhuku nezvazvo. Ishe Brabazon
Kugara kwebhuku kunova chinotsiva kurirava. Anthony Burgess
Ukaverenga mabhuku, unopedzisira wave kuda kunyora zvinyorwa. Quentin crisp
Kunyora bhuku rakanaka, ini handizvione sezvakakosha kuziva Paris kana kuverenga Don Quixote. Cervantes, paakanyora, anga asati achiverenga. Miguel Delibes chinobata mufananidzo
Nyika izere nemabhuku akakosha asina anoverengwa nemunhu. Umberto Echo
Vanhu vane rudo nebhuku vakaita sevaya vari kudanana nemukadzi wavo: havazorore kudzamara vazvipa kushamwari dzavo kuti vavayemure. Nekudaro ivo vanorema uye kazhinji vanomurasa. Clifton fadiman
Ini ndinoona zvakaipa kwazvo kupedza mwedzi ndichinyora bhuku uyezve mimwe mwedzi ndichigara ndichibvunzwa zvandaida kutaura mariri. Sir Arthur John Gielgud
Hupenyu hwedu hunogadzirwa zvakanyanya nemabhuku atinoverenga kupfuura nevanhu vatinosangana navo. Graham greene
Muchinda anofanira kunge aine matatu emakopi ebhuku rimwe nerimwe: rimwe rekuratidza, rimwe rekushandisa, uye rechitatu kukwereta. Richard Heber
Kune munyori wechokwadi, bhuku rega rega rinofanirwa kuve mavambo matsva maanoyedza chimwe chinhu chisingasviki kwaari. Ernest Hemingway
Bhuku rakaipa rinoda basa rakawanda kunyora serakanaka; inobuda nekuvimbika kumwechete kubva kumweya wemunyori. Aldous huxley
Ndiudze bhuku rawakaverenga uye ini ndichakuudza kuti wakaba nani. Ilya Ilf
Mabhuku angu ndiwo akaenzana ezvinyorwa zveBig Mac ine rubatsiro rukuru rweFrench fries. Stephen King
Usambofa wakatonga butiro nebhuku rayo. Fran lebowitz
Kana ichangopera, bhuku rinoshanduka kuita muviri wekunze, akafa asingakwanise kugadzirisa pfungwa dzangu, ndoda kufarira kwangu. Claude Levi-Strauss
Iyo yepamusoro iyo mhando yebhuku iri kumberi mberi kwezviitiko. Vladimir Mayakovsky
Ndinoda kuti mabhuku azvitaurire ega. Iwe unoziva kuverenga here? Zvakanaka, ndiudze zvinorehwa nemabhuku angu. Ndishamise Bernard malamud
Kuburitsa bhuku kuri kutaura patafura pamberi pevaranda. Henri Motherlant
Kana iwe ukatengesa mumwe munhu bhuku, haumutengeseri pondo repepa, inki uye glue, usina kumupa hupenyu hutsva. Christopher Morley
Maumbirwo nemaitiro ndizvo chete zvinhu zvinodiwa nebhuku; mazano makuru zvidimbu. Vladimir Nabokov
Mabhuku idiki tsanga dzejecha dzinoumba nekufamba kwenguva. Clara Isabel Simo
Bhuku rakanaka rinofanira kukusiya uine zvakawanda zvezviitiko, uye zvishoma kuneta pakupedzisira. Unorarama hupenyu hwakawanda uchiverenga. William Styron
mabviro: Zana remakore rekufambidzana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Mabhuku » 30 akasarudzwa mitsara nezve mabhuku
Nieves Herrero: mabhuku
Ines yemweya wangu